Akunjalo kudala langena Russian emakethe model entsha DVR Neoline X-COP 9000, ukubuyekezwa zazo zikhona ezahlukene. Onjiniyela yahlanganiswa ibe esibonakalayo olulodwa nje abashayeli kudivayisi ezimbili ezidingekayo - Isiqophi futhi radar umtshina. hybrid okusha benqoba zonke abalandeli imoto izesekeli, ngakho ngenxa yokuthandwa kwayo, liye landa ngokushesha ngempela.
Ngo-2006, inkampani elaziwayo elincane sekuqalile ukukhiqizwa electronics ngenxa yezimoto wagxila kuphela emakethe Russian. Umkhuba yimpumelelo kakhulu waqala amatilosi, futhi ingakapheli iminyaka engu-3 ngemuva kokuqala zokukhiqiza inkampani ukhiqiza lokuqala imoto nevidyo rekhoda yayo, okuyinto ngesivinini Amazing Aya ngokuya ethandwa kakhulu, ukuthi kuletha Abadali imali eningi. Amadivayisi zahlolwa abantu abaningi e mikhankaso ezahlukene. Ngenxa yalokho, le nkampani unqobile nokwethenjwa ngamakhasimende futhi abe professional weqiniso ekukhiqizeni amadivayisi yezimoto.
Kuze kube manje, omunye onobuhle engcono zokukhiqiza kuyinto DVR Neoline X-COP 9000. Izimpendulo ngaye kwesokunxele abathengi njengoba nje kanye nabashayeli wazibonela abamazi okuningi ngalezi amadivaysi. Ngebuhle nebubi, ngokuvumelana laba bantu, unikezwa ekupheleni.
izinto eziza kuqala
Ithimba ochwepheshe ukubeka wonke amandla abo ukuze ukudalwa imishini zobuchwepheshe ezokwenza ukwanelisa zonke izidingo abashayeli Russian. Umhlaba zobuchwepheshe zanamuhla kwenze laba isisekelo segama onobuhle ezintsha. Injongo unomphela inkampani - ukuthatha isinyathelo phambili, izindinganiso yesimanje futhi ihlanganise zonke nemibono zibe yiqiniso.
Modern zabathengi electronics emakethe okhula ngokushesha ngempela. ukukhiqizwa Neoline unikeza amakhasimende ibanga elikhulu imikhiqizo, okubandakanya electronics, egcwele zakudala sahlulwa. Lokhu kuhlanganisa:
kudivayisi Universal wayeqamba;
a ezingemuva umbono ikhamera;
imibono Creative wathola futhi iqaliswe nsukuzonke, futhi kuyingxenye engavamile kulezi kwaba inketho ethola okuhambisana imisebenzi umshayeli kudivayisi eyodwa. Ababhali ukuqaphela imibono yabo siqu futhi wadala imoto DVR Neoline X-COP 9000. Izibuyekezo abanikazi balo alinakuba ezimbi, ngoba DVR ne radar umtshina - akuyona nje idivayisi elula, kodwa futhi intengo ngempela evumayo.
Njenganoma yimuphi umshini, inkampani Neoline ihlinzeka isiqinisekiso lapho umnikazi we-rekhoda ividiyo, uma izinkinga, ongasinika yona esikhungweni sesevisi, okuzokwenza ukuqeda eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa.
Ngaphezu kwalokho, usizo okuthembekile ingatholakala kwamakhasimende. abameleli balo kuzosiza umsebenzisi ukuqonda izilungiselelo siqu futhi ngeke aphendule yonke imibuzo. Inkampani enakekela amakhasimende ayo, ngoba bazikhethela lokhu ukukhiqizwa.
Radar Detector Neoline X-COP 9000 (ngezibuyekezo nezithombe ingatholakala ngezansi), ngenhlanhla, akuvamile ahlahlele, ngakho zabanikazi akudingeki ukuba sikhathazeke ngokuthi ukuphepha ukuthenga okusha. Idivayisi kubhekwa kabanzi, umuntu ufunda mayelana nezici zayo futhi uqinisekise ukuthi ngempela uhola ohlwini yesimanje video futhi kubafuni.
Asinakusho ukuthi ubukhulu igajethi encane. Nakuba-ke Kuyaphawuleka ukuthi lokhu kuphela umbono wokuqala, okuyinto evame edukisayo. Empeleni, lokhu hybrid - icwecwe kakhulu wonke amamodeli yamanje. Visual inkohliso etholwe ngenxa umzimba side. Ngakho-ke, umshayeli abone kuphela iphaneli emuva, izinkinobho isikrini uma idivayisi ogibele somoya.
Ohlangothini lwesobunxele kuyinto Isixhumi okhethekile yokuxhuma i-adaptha yamandla. Ngaphandle-ke, kukhona abakhona inkinobho lucwaningo ukusetha kabusha ophoqelelwe, futhi idivaysi encane usayizi orifice eyakhelwe microphone.
Ngakolunye uhlangothi kukhona inkinobho amandla kanye pair of Slots, eyenzelwe khadi ukuthi ukhuluma futhi ikhono ukurekhoda ulwazi umthamo omkhulu. Ukuqopha kungabuye ngokushesha wathutha noma bakopisha besebenzisa omunye medium kwenye. Izinzuzo lokhu anezele engavamile bayakwazisa akuzona zonke umnikazi, kodwa ukuqonda ngempela umqondo abasunguli kungaba ngesikhathi kwehla ingozi. Ngempela, ezimweni ezinjalo, umuntu drive kunikezwa umhloli, kanti owesibili kusuka umshayeli. Lokhu kuzokwenza kakhulu lula inkinga, uma umlandu usiwa ekhotho kanye kudinge ukuthintana okuthile ubufakazi ozophazanyiswa kanye icala bese kuba nengozi.
DVR Neoline X-COP 9,000 izinkulumo ezimbi eziphathelene ke asikwazi ukuba, njengoba inqubo yokudlala ukuqopha komunye ikhadi kwenziwe nge speed Amazing, yini futhi kubonakala ngezisusa uhlelo ifayela ngesandla yakhelwe.
Mayelana yasibamba ngokuqinile Kubalulekile ukwazi eminye imininingwane ukuthi kubalulekile abashayeli abaningi ukukhethwa leli thuluzi. Smart Chofoza uhlelo esiyingqayizivele ingavula kalula ubambe DVR ku somoya wakho, naphezu lingakanani encane. Ukuncela inkomishi linamathela phezu saloku okokuqala. Ngisho ne kunyakaza eqinile awusebenzi unamathele futhi kuzohlala kunjalo. Futhi uma wena uphume emotweni eyolanda DVR kuzakuvela bekulula - ambalwa ukunyakaza elula lonke ulwazi olufanele ezandleni yomnikazi, bavikelekile nabakhwabanisi izandla.
Bonisa futhi User Interface
Ngokuvamile abasebenzisi unesithakazelo ngaphambi kokuthenga ama-ochwepheshe lokho babuyekeze. Neoline X-COP 9000 izibuyekezo zamakhasimende kanye namadivayisi efanayo has ochwepheshe ezinhle. Siyabonga imibono yabanye abantu, abashayeli Ungakhetha bona abe yisibonelo sethu esiphelele oluzosiza kubo isikhathi eside. Kuvele umbandela ezibalulekile lapho ekhetha ukubonisa. Ngo-X-COP 9000 ingamasentimitha ezimbili idayagonali - lena ngempela ngokwanele ukuba ayisebenzise.
Ngaphezu kwalokho, akufanele sikhohlwe iqiniso lokuthi lokhu imodeli kusekelwe IPS--matrix. Leli qiniso libonisa khona wokubuka engeli ebanzi akukho ukukhanya e sezulu sunny. Isikrini ilawulwa izinkinobho, futhi kwenza kube lula ukuba isikhombi Easy Touch. 4 kuphela izinkinobho ayatholakala umsebenzisi ukulawula idivayisi. engavamile wabo ukuthi ngephutha uchofoze kubo cishe akunakwenzeka, kodwa amaphesenti ayikhulu hit inkinobho, uma kunesidingo, kuqinisekisiwe ngisho noma beshayela.
Ukuvula imenyu, umnikazi uzobona 4 amaphuzu:
Zonke imisebenzi edingekayo zikhona imenyu ahlukene:
unezela GPS amaphuzu kwi drive noma inkumbulo-mibhalo;
ukuvula kanye nokuvala i-microphone;
Ukuphatha isaziso umsindo;
Eliphezulu esibonakalayo futhi amafonti ahehe asinakubhuntsha ukujabulisa abathengi. Kulezi zinto amancane uveta okuthembekile, eliphezulu futhi umsebenzi olunzulu okuyinhloko.
Amaphoyisa radar - kungenzeka lokhu inkinga ezivamile abashayeli emgwaqeni. Ngakho-ke, isici elikhulu sevidyo izokwengeza umtshina radar ukuthola zonke izinhlobo amaphoyisa radar. Lokhu futhi benze onjiniyela, ukuhlinzeka amakhasimende kudivayisi ekahle. Neoline X-COP 9000 uyakwati kubona hhayi kuphela radar, kodwa futhi ngamandla ongaphakeme izindlela, isivinini kokungathembeki. Ngaphezu kwalokho, sobathathu DVR GPS-module, azisa umshayeli ngisho izakhiwo, hhayi likhipha neyodwa isignali. Naphezu kwentuthuko yesimanje kwezobuchwepheshe, idivayisi nalezi zici namanje wathola akulula neze. Hybrid ihlola idatha fast ngokwanele ku-database bese azisa umnikazi esondela endaweni control ijubane.
Idetector kunezinqubo ezine wokusebenza:
"Umuzi." Kule modi, idivayisi sekuqalile ukuba kucikelela ephansi futhi ezinquma zonke positives bamanga.
"Track". Ukuzwela, kunalokho, anda.
"Turbo". Siyabonga kuye, kungaba ngesivinini ukuze uthole isaziso uma uxhumana radar.
"Intelligent". Hybrid ngokuzimela ukushintsha ukuzwela, unikezwa ijubane le moto.
Faka izithombe ezithwetshuliwe - lena ngempela siyindlala DVRs yesimanje. Abanye abantu musa ukubhekana naso, kanti kwabanye kuba lalingekho nhlobo. Kodwa lokhu imodeli kungahlali iyiphi yalezi zindlela. Neoline X-COP 9000 ubhekana umsebenzi yezithombe lokushicilela - okwazi ukuqopha amavidiyo ezwini lesinqumo kahle eliphezulu (1920x1080) kanye ngesivinini 30 ngesekhondi. Imenyu izilungiselelo kuhlanganisa ukulungiswa of ukukhanya, nika umehluko, nokucija kanye ukuthuthukisa uhla ashukumisayo-algorithm, okuyinto ngempela nethuba elifanele.
Ngenxa yalokho, umshayeli ungabona high quality umfanekiso. Uma ubuka ividiyo eqoshiwe zizobonakala wonke ngisho nasemininingwaneni emincane kakhulu: isibonelo, ungabona ngokucacile lwelayisense ukuhambisa eduze kwemoto, naphezu kwazo zonke izibonakaliso abangena ngaphansi emkhakheni Ngenxa DVR, kanye nabantu bedlula abantu.
Ngobusuku ngokudubula isithombe sokugcina hhayi ziyoba zimbi. Lapha inani izimoto, imithombo ukukhanya lomgwaqo-futhi-ozayo nazo zizobonakala ngokucacile. I negative kuphela - akusiwona umsindo inomsindo kakhulu, okuyinto njalo abona othile ewunikela ngesikhathi nokushutha ividiyo ebusuku. Nakuba ngokuvamile abantu akudingeki umsindo orekhodiwe, umgomo oyinhloko kuyinto ukulungisa izinto ezithile. At ibanga cishe 20-25 amamitha zonke imininingwane edingekayo kuzobonakala, futhi ukukhanya okuvela izibani, amawindi noma amarobhothi, ngeke siphazamise sokudubula.
Ngaphezu kwakho konke okungenhla izinzuzo okukhulunywe kanye nezici, futhi kufanele kuphawulwe esinye isici ezithakazelisayo. Iqiniso lokuthi DVR nabo bangenza umsebenzi alamu. Okusho ukuthi, uma ushiya idivaysi emotweni ebusuku bese uvula mode ezifanele, inzwa motion kwabangela ngokushesha, futhi hybrid uzoqala ukuqopha. Akukona nje isivikelo kuhle ethembekile ukweba, kodwa futhi isilingo sokuba kubaduni. Phela, njengoba ulwazi ulwazi olunje, umnikazi imoto futhi DVR angathola izingilazi eziphukile ekuseni kanye nokuntuleka umtshina radar. Ngakho-ke, ngaphambi kokushiya iyunithi ebusuku emotweni, kufanele uthole kuye endaweni lapho ngaphandle-ke ngeke kakhulu, kodwa noma kunjalo uthatha izithombe can. Kulokhu, Ukuvikelwa Siyaqiniseka futhi ungakwazi ukulala ngokuthula ngaphandle ukukhathazeka mayelana ukulahlekelwa.
Futhi omunye inzuzo encane - kuba ibhethri afakwa icala. Siyabonga kuye, DVR bazokwazi ukufeza Ucwaningo luthole hhayi kuphela ngaphakathi kwemikhawulo emotweni, kodwa ukuqhela kuye. Ngokwesibonelo, uma kwenzeka ingozi, ngaphezu ukushayisana imoto, futhi ungakwazi alobe ingxoxo umhloli ukuthi kungaba wusizo sikhatsi lesitako.
Sekukonke Neoline X-COP 9000 omuhle kuphela okuvelayo izinqolobane ngemva wokutholakala ngezinsuku zokuqala ukusetshenziswa. Abathengi ngokuvamile ukumangala ngisho nezici Neoline X-COP 9000. Izibuyekezo abanikazi babo nje ngeke likwazi ukuthi limbi.
Yiqiniso, abantu yahamba ezinye downsides, kodwa bona imininingwane - I-iningi nje akunandaba. Ngokwesibonelo, abashayeli ungathandi ubukhulu divayisi, kodwa, njengoba kushiwo ngenhla, lokhu kuphela umbono wokuqala edukisayo, futhi umuntu ngamabomu kwenza iziphetho ngokuphamazela. Abanye abenza hhayi ngempela like intengo, ngoba ephakeme ngempela kunangesikhathi kweminye imihlobo. Kodwa akufanele sikhohlwe ukuthi kudivayisi eyodwa ilingana amaningi. Uma ukuthenga kubo eceleni, imali izoya okuningi.
Ezinye izindaba zika-abasebenzisi ziyaneliswa. ukubukeka kahle, kulula ndlela obandayo, ekutholweni radar - konke lokhu kwenza Neoline X-COP 9000 idivayisi ukwahlukahlukana. Abanye abashayeli ngisho zithi kokuyithenga, zonke izifiso zazo zigcwaliseka kweso futhi manje base nhlobo sibe khona isidingo nezinye izesekeli imoto.
imicabango yabantu ochwepheshe
Ngokungangabazeki, abakhiqizi Neoline X-COP 9000 abasebenzisi Izibuyekezo neze uzifihla lonke. Futhi esibalweni sawo sihlanganisa hhayi kuphela ukubukwa abathengi okwejwayelekile, kodwa nakulabo abantu asebethole wazama eziningi amathuluzi anjengaleli futhi kahle ababeyizazi kubo. Kuyinto iseluleko sabo ukuze basize Wabasaqalayo bazikhethele imodeli engcono.
Mayelana Neoline X-COP 9,000 ochwepheshe waveza kahle. Okokuqala, bona wazi inhlanganisela imisebenzi emibili ebaluleke kakhulu (rekhoda futhi radar umtshina). Futhi uphawula ubukhulu ekahle kwesikrini, lapho abantu kalula ubone yonke imibhalo bese ukhetha into efiselekayo. Ngemva kokuhlaziya imini nobusuku sokudubula, abasebenzisi abanokuhlangenwe nakho abaye bafinyelela esiphethweni ukuthi le divayisi okungcono okuqoshiwe izinga njengoba isithombe bese umsindo.
Kubuka ukubuyekezwa, singaphetha ngokuthi Neoline X-COP 9000 akuyona ngempela yinhlonipho. Futhi ngenxa yokuthandwa kwayo, ukhula ngesizathu esithile.
N.Nekrasova inkondlo "Frost, Ikhala Red": isifinyezo
Ukulungiselela 'Motilium': imiyalelo yokusetshenziswa